Izinyathelo zekati le-nail polish
Ukukhombisa i-Steps of cat eye nail polish engezansi kwakho: Iso lekati lekati ngumkhiqizo othuthukisiwe we-nail polish. I-Magnet powder yengezwa ku-gel yeso lekati, engakha ukukhanya kwebhande ngemuva kokuboniswa ukukhanya, okubukeka kufana ne-opal. Izinyathelo zekati le-nail polish:
Yini inqubo efanelekile yobuciko be-nail polish nail?
Ukuguqulwa Okokuqala sebenzisa ifayili elijwayelekile ukusika uzipho esimweni esakhiwe, bese unaka ithiphu lesipikili ukususa nokuhlanza imfucumfucu yomunwe ngefayela lesiponji ukuvikela ingcina ye-nail polish ukuthi inganamatheli emfucumfucwini yeminwe futhi ibangele isipikili ithiphu ukuvuka ngokushesha futhi uwe. ...
Yini isidingo sokuzithengela ubuciko be-nail?
Abangane abaningi baye ezindaweni zokucwala izinzipho izikhathi ezimbalwa, futhi bonke banombono wokwenza izipikili ekhaya. Manje yini oyidingayo ukuze uzenzele izipikili? Amathuluzi adinga ukuthengwa ahlukaniswe izigaba ezimbili lapha, ake sibheke ukuthi yimaphi amathuluzi odinga ukuwathenga ngobuciko bezipikili. ...
Umehluko phakathi kwe-nail gel polish ne-nail oil
Kulezi zinsuku, ubuciko be-nail imvamisa buyimikhiqizo ye-phototherapy. Kuqukethe i-gel polish gel, i-gel yokugcwalisa, i-gel edwetshiwe, udaka oluqoshiwe, njll. Kufanele yomiswe ngomshini wokwelapha. Umshini we-Phototherapy I-gel nail polish namafutha e-nail esigabeni se-phototherapy awafani. I n eshiwo ngaphambili ...
Ulwazi lwe-Gel Nail polish
I-Nail gel polish ayinabungozi emzimbeni, ngakho-ke ungayisebenzisa ngokuzethemba. I-Nail polish glue yehlukile kunoyili wezipikili ngoba ayishintshashintshi futhi izokwakha ifilimu efana nepulasitiki ngaphansi kwemisebe ye-ultraviolet. Izingxenye eziyinhloko ze-nail polish yi-resin eyisisekelo, i-photoinitiator, nokungeza okuhlukahlukene ...
Ingabe i-nail gel polish iyingozi emzimbeni womuntu?
I-Nail gel polish ayinabungozi emzimbeni, ngakho-ke ungayisebenzisa ngokuzethemba. Ijeli le-Nail polish lihlukile kune-nail polish ngoba ayishintshashintshi futhi izokwakha ifilimu efana nepulasitiki ngaphansi kwemisebe ye-ultraviolet. Izingxenye eziyinhloko ze-nail polish yi-resin eyisisekelo, i-photoinitiator, kanye ...
Buyini ubuciko benzipho yekati? Ungayisebenzisa kanjani uzibuthe wekati lesipikili?
Buyini ubuciko benzipho yekati? Amehlo ekati i-nail polish, njengoba igama liphakamisa, yenziwa ukuthi ibukeke njengamehlo wekati. Ingakhombisa ukukhanya okuhlukile nesithunzi ngaphansi kokushintsha kokukhanya, futhi kufana ne-opal esesandleni ukuheha ukunakwa. Odade abancane abathanda ukwenza ubuciko bezipikili bangayizama. Ngemuva kwakho konke, th ...
Mayelana ne-Nail gel ezinhlotsheni ezahlukahlukene futhi uzigcine kahle
Kunezinhlobo eziningi ze-nail polish, ngakho-ke qaphela ukuthi ungasebenzisi okungalungile i-Nail gel polish yehlukile kunamafutha we-nail. I-nail polish oil idinga ukomiswa kuphela, kepha i-gel nail polish idinga ukukhanyiswa. I-nail oil polish ingasulwa nge-remover ye-nail polish, ne-gel polish gel n ...
Ijeli yokwelulwa ngezipikili kanye nezingcezu zezipikili
Uyini umehluko phakathi kwe-nail extension gel nezipele zezipikili? Izipikili ezijwayelekile zenziwe ngezipikili zokufakelwa, ezisetshenziselwa ukugoqa. Izindlela ezithile zokucubungula zihlukaniswe nge-patch egcwele kanye ne-half patch. Isigamu sesigcawu siyinkimbinkimbi kancane kunesigcawu esigcwele. Ukunweba isipikili, ...
Ungayisebenzisa kanjani uzibuthe wekati lesipikili senzipho ukudala izipikili ezinhle?
I-Cat eye nail polish nail art isitayela esithandwayo sobuciko be-nail, esithandwa kakhulu phakathi kwabesifazane abasebasha. I-Cat eye nail polish yenza umphumela njengamehlo wekati. Ngakho-ke, ungayisebenzisa kanjani uzibuthe wekati lesipikili? Uyini umehluko phakathi kwe-nail polish yeso lekati ne-nail polish ejwayelekile? Ake sithathe ...
Isebenza kanjani i-gel yesipikili engelamaphepha?
Amantombazane amaningi anezipikili ezincane nezincane, kanti uhlobo aluhle kakhulu, lukukhombisa ukuthi ungenza kanjani ukunwetshwa kwezipikili: Isinyathelo 1: Ukulungiselela 1. Nquma umbhede wakho wezipikili kuqala. Qaphela. Ngemuva kokucheba, izinzipho zakho zizobukeka zingcono. Kepha qaphela ukuthi unganqumi izinhlangothi zombili zezipikili, linda isandiso ...
Ungayisusa kanjani i-nail gel ngokushesha kuzipikili zakho?
Ukupakishwa kwejeli ye-nail polish kuyefana ne-nail polish yendabuko, futhi kusetshenziswa ngqo nebhulashi lakhona. Kodwa-ke, ngoba i-nail polish iyelapheka ngokukhanya, ingaphandle lebhodlela le-nail polish kumele lipendwe ukuvimbela ukudluliswa kokukhanya. Akuyona into enobuthi, ayinaphunga futhi iyathandeka ...